တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: July 2007
Posted by Philip Shield at 3:08 PM6comments:
အဖေ့ဘက်မှ အဘိုးသည် ပြည်ကြီးပေါက် hokkien တရုပ်အစစ်ဖြစ်သည်။ Amoy ဆိုသောအရပ်မှလာသည် ဆို၏။ စင်္ကာပူတွင် ရုံးနားလေးက၊ Tanjong Pagar နားက Amoy ဆိုသော Hawker Center ကိုစတွေ့တော့ အဘိုးရဲ့ဇာတိကို သတိရမိ၏။ အဘိုးဆယ့်သုံးနှစ် ဆယ့်လေးနှစ်သားလောက်တွင် သင်္ဘောကြီးစီးပြီး မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာသည်ဟုဆို၏။ သင်္ဘောပေါ်တွင် တနှစ်ကျော်လောက် စီးခဲ့ရသည် ဟုဆို၏။ သူ့အမည်က "ကျို စီ လေး" ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်ရောက်တော့ တရုပ်အချင်းအချင်း နာမည်ကို အဖျားစွတ်ပြီး "Lay ya".. "Lay ya" ဟုခေါ်သည်ဆို၏။ အဲဒါနဲ့ မြန်မာတွေက "ကိုလေးရာ" လို့ခေါ်ကြသည်ဆို၏။ အဲဒီ "ကိုလေးရာ" ကို ခေါ်ရင်းခေါ်ရင်းနဲ့ မြန်မာမှု ပြုလိုက်တော့ "ဦးလယ်ယား" ဖြစ်သွားသည်။ စင်္ကာပူ မှာ "La" တွေ "ya" တွေ ထည့်ထည့်ပြောတော့ အဘိုးရဲ့ မြန်မာအမည် ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အမှတ်ရလာသည်။
သူသည် တရုတ်သာဆိုသည်၊ မြန်မာအလွန်ဆန်သည်ဟု ပြောရပေမည်။ သားသမီးများ ကလည်း အဖေ ဟု သာခေါ်၏... "ပါပါး" တွေဘာတွေမခေါ်ပါ။ ခေါ်ခိုင်းပုံလဲမရပါ။ အနေရိုး၏။ ကွမ်းကို အလွန်စား၏။ ကွမ်းအစ်၊ ထုံးဘူးများ တည်ထား၏။ ငပိရည် လွန်စွာကြိုက်၏။ ကြိုက်လွန်းလို့ ဇွန်းလေးနဲ့ ခပ်ပြီးတော့တောင် သောက်သည် ဟုပြောကြသည်။ မြင်းကောင်းကောင်းစီးတတ် သည်ဟုဆို၏။ လူပျိုဘ၀ က မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း ပြွန်တန်ဆာမြို့လေးတွင် မြင်းကြီးကို စီးကာ ရွာတကာပတ်ပြီး ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်သည် ဆို၏။ အလုပ်လည်း အလွန် လုပ်နိုင်သည်။ ၀ိရိယလည်း လွန်စွာကောင်း၏။ တရုတ်ပြည်က လာတုံးက လက်ချည်းပဲလာခဲ့သည်။ နောက်တော့ သူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ ဘာတွေ တည်ထောင်သွားနိုင်ခဲ့ လေသည်။
ပြီးတော့ သူက မြန်မာလိုကောင်းကောင်းပြောတတ်သည်။ မြန်မာစာလည်း ကောင်းကောင်းရေးတတ် ပုံရသည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က သူ့မြန်မာလက်ရေးတွေကို ကုန်သွယ်စာတွေ၊ ကုန်ရောင်းပြေစာ တွေ ကုန်ဝယ်ဘောင်ချာ ၀ါကျင်ကျင်လေးတွေ မှာ အမှတ်မထင် တွေ့ရဖူး၏။ သူစာရေးလျှင် အားအပြည့်ထည့်ရေးပုံရလေသည်။ ညီညာသပ်ရပ်လှပြီး လေးထောင့် ကြီးကြီးစောင်းစောင်း ကြီးတွေ ဖြစ်သည်။ စာရင်းတွေမှတ်လျှင် တရုတ်စာကို တချို့နေရာလေးတွေမှာ နဲနဲလေးပဲ ညှပ်ပြီး ထည့်ထည့်ရေးသည်ကို တွေ့ဖူးသည်။
ပွဲရုံအလုပ်ဆိုတော့ စကားတွေက တစ်နေကုန် ပြောကြရလေသည်။ သူက စကားပြောလည်း အလွန်ရွှင်သည်။ မြန်မာစကား ကို ၀တ္တုနိပါတ်ပိဋ္ဋကတ် တို့ဖြင့် ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောတတ်သည် ဟုဆိုသည်။ တရုတ်သံတော့ နဲနဲဝဲလေသည်။ သူပြောတဲ့ မြန်မာပုံတိုပတ်စတွေဆို မြန်မာတွေ အစစ်တွေပင် မှတ်မှတ်ထားရသည်ဆို၏။ "မြင်းပြေးသလောက် လူမောတယ်" တို့၊ "တောင်သူအလုပ် အရူးအလုပ်" စတဲ့စကားတွေဆို သူ့မိတ်ဆွေ လူကြီးတချို့ က ပြန်ပြန်ပြောပြလို့ သိရသည်။ "မြင်းပြေးသလောက် လူမောတယ်" ဆိုတာက "ဇာတ်"တွေဘာတွေထဲမှာ တုတ်ကို မြင်းခေါင်းရုပ်စွပ်ပြီး ဟဲ့မြင်း ဟဲ့မြင်း နဲ့ စီးပြကြပါတဲ့အခါ... ဘေးလူအမြင်မှာ တော့ တယ်ဟုတ်ပါ့လားပေါ့... တကယ်က အထဲမှာက ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကိုယ်ပြေးနေရတာတဲ့။ အဲဒီတော့ မြင်းအစစ် မဟုတ်တော့ "မြင်းပြေးသလောက် လူမောပြီပေါ့"။ အတိုးနဲ့ချေးပြီး စီးပွားလုပ်ရတဲ့အခါလဲ အဲဒီလိုပါပဲတဲ့။ ကိုယ်ပိုင်ငွေမဟုတ်တော့ ဘေးအမြင်မှာ စီးပွားတွေကတော့ ဖြစ်နေတယ်ထင်ရတာပဲ တဲ့။ တကယ်က စီးထားတဲ့မြင်းက (လုပ်နေတဲ့ငွေက) အစစ်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ခြေထောက်နဲ့ ကိုယ်ပြေးနေရတာဆိုတော့ စီးပွားဖြစ်လေ မောရလေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်တဲ့။
အဘိုးက သွေးတိုးရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးခဲ့သည်။ အဘိုးဆုံးတော့ ကျွန်တော်က ၃ နှစ် ၄နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးသည်။ အဲဒါကြောင့် လည်း သူ့ကို ရေးတေးတေးလေးပဲ မှတ်မိသည်။
Posted by Philip Shield at 1:17 PM No comments:
များမကြာမီမှာ မိတ်ဆွေရဲ့ Hand-Phone ကို Mini Movie Projector လေးတစ်ခု သဖွယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတော့မယ်။ Motorola ရဲ့ နောက်မျိုးဆက် "Moto mobys" မှာ feature တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လာပါတော့မယ်။ More...
Posted by Philip Shield at 5:06 PM No comments:
I recently readadotnetkicks article where the author laid out an approach for using the ASP.NET AJAX client-side framework to synchronously executeaWebMethod that does some sort of server-side validation or computation. I believe the idea here was while this validation is executing the page designer does not want the end user interacting with the other elements on the page. I had not encountered this issue before, but I started working out how I would have approached it. I enjoyed the authors article and I liked how he leveraged the existing ASP.NET AJAX framework and that the solution should would work with the existing ASP.NET CustomValidator. Because the operation is synchronous, you can invoke the WebMethod from the ClientValidationFunction and set the IsValid bit to true or false depending upon the result. However, I am not sure if I would like having the page go unresponsive while this validation is taking place. Especially if it is unclear to me that the field I entered data into was going to require validation as I tabbed through to the next control.
Live Demo: Sample 1 | Sample2| Sample 3
Download: Sample Web Site
Posted by Philip Shield at 2:58 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 11:03 AM No comments:
How to add Latest News from "PhatPa.com" inablog?
4) Feed တွင် "Add To Blog" ကို နှိပ်ပါ
5) "Feed URL" တွင် http://www.phatpa.com/?q=rss.xml ကို ထည့်သွင်းပါ။ "Continue" ကိုနှိပ်ပါ။
6) Title ကို လည်းသင်နှစ်သက်သလိုပြင်လို့ရပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ "Latest news from ဖတ်ပါ့" လို့ပြင်လိုက်သည်။ Show ကို ဒီတိုင်းပဲ5Items ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ "SAVE CHANGES" ကို နှိပ်လိုက်ရင် သင့် Blog မှာ PhatPa.com မှ နောက်ဆုံး သတင်းများ ပေါ်လာပါမည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူ့အလိုလို update ဖြစ်နေပါမည်။
Posted by Philip Shield at 5:34 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 7:25 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 5:57 PM 1 comment:
Murphy's Law ဆိုတာကတော့ အနောက်တိုင်းသားတွေ သုံးလေ့ရှိတဲ့ အသုံးအနှုံးတခုပါ။ အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်း ဆိုသလို အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ တချိန်ထဲမှာ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် အနောက်တိုင်း culture မှာ "အဲဒါ Murphy's Law ပေါ့ဗျာ" စသည်ဖြင့် ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း က ရုံးက host လုပ်ထားတဲ့ datacenter ကို hacker ၀င်သွားတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ မလေးရှားမှာ presentation လုပ်ခါနီးအချိန်ကြီး။ ချွေးကို ပြန်သွားတာပဲ။ system သမားကို ဖုံးဆက်ပြီး server တွေ အမြန် restart လုပ်ခိုင်းရတယ်။ Database တွေ Restore အမြန်လုပ်ခိုင်းရတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာက တချိန်ထဲမှာပဲ စင်္ကာပူရုံးက အဲယားကွန်းတွေက မအေးတော့ဘူးတဲ့။ ဘာလို့ ကြောင်ကုန်မှန်း မသိဘူးတဲ့။ နောက်နေ့ကျတော့ ပြန်အေးသတဲ့။ ထူးဆန်းပါပေ့။ နောက်တခုက... ရုံးနားလေးမှာ မိုးကြိုးပစ်ခံရတယ်။ ကွန်ပျူတာတွေ အကုန်ပိတ်ကုန်တယ်။ မီးပျက်သွားလို့။ တခါတည်း မှောင်ကျသွားတာ။ အသံက ဒိန်းကနဲပဲ။ တော်တော်ကျယ်တယ်။ breaker ကျသွားတာတဲ့၊ လျှပ်စီးဝင်လို့။ အဲဒါလေးတွေ မြင်ရတော့ စဉ်းစားမိလို့ ဒီ Murphy's law ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးလေး ကို အမှတ်ရလာတယ်။
"ကံဆိုးမသွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ" ဆိုတဲ့ ဗမာစကားပုံ နဲ့တူမလားတော့ မသိဘူး။
Posted by Philip Shield at 9:20 AM No comments:
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကို RSS နဲ့ ခေါ်သုံးလို့ရတယ်။ Blog သမားများ အကြိုက်ပေါ့။ မြန်မာပြက္ခဒိန် ကို ရေးတဲ့ ကိုဝဏ္ဏကို ရေးထားတာ။
RSS Feed Address ကတော့: http://samerss.myanmarcalendar.com
blogger.com ရဲ့ New version သုံးတဲ့လူတွေအတွက် လုပ်နည်းမှာ
6) Title ကို သင်နှစ်သက်သလိုပြင်လို့ရပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ "မြန်မာပြက္ခဒိန်မှ ယနေ့နေ့စွဲ" လို့ပြင်လိုက်သည်။ Show ကို 1 Item လို့ပြင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ "SAVE CHANGES" ကို နှိပ်လိုက်ရင် သင့် Blog မှာ မြန်မာနေ့စွဲ ပေါ်လာပါမည်ြ။
ရက်စွဲမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပရိုဂရမ်မှ သူ့အလိုလို ထုတ်ပေးနေပါမည်။
ကိုဝဏ္ဏကို မှ သူ့သဘောထားကို "ကြာရင် မြန်မာပြက္ခဒိန် ပျောက်တော့မှာ ဗျ။ အခုခောတ်မှာ ဘယ်သူမှ မြန်မာရက်ကို အလွတ်မသိကြတော့ဘူးဗျ။ ဒါလေး သုံးလိုက်တော့ ကနေ့တော့ လပြည့်ဟေ့၊ ကနေ့တော့ လဆန်းဘယ်နှစ်ရက်ဟေ့ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ.. သိဖို့လို့လွယ်တယ်ပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော ရိုးရာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း လည်း မည်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အခုကိစ္စက လုပ်ကို လုပ်ရမည့် အရာပါ။" စသည်ဖြင့် ရှင်းပြသည်။
Posted by Philip Shield at 6:03 PM 10 comments:
Labels: News, Programming, Useful Resources
Posted by Philip Shield at 1:06 AM2comments:
ဒီနေ့ မန္တလေး ALPHA Computer အကိုကြီး ကိုရဲမြတ်သူက ဒီနေ့ Link တစ်ခုပို့တယ်။ အိုင်တီ Professional တစ်ယောက်အတွက် တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အနာဂါတ်မှာ အလားအလာရှိတဲ့ နည်းပညာ (၁၂ )ခု အကြောင်းနဲ့၊ ကွယ်ပျောက်ပြီး ကွယ်ပျောက်လုဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ နည်းပညာ (၁၀) ခုအကြောင်းပါ။ အဲဒီ ဆောင်းပါးနှစ်ခု ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း Share လုပ်ချင်လာတယ်။
လူတွေကပြောတယ်... "IT Market က Hot တယ်... Hot တယ်..." လို့ ပြောပြောနေကြတယ်။ "ကွန်ပျူတာသမားတွေကတော့ အလုပ်ရလွယ်တယ်ဗျ..." တဲ့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါတကယ်ပဲလား။ တကယ်တော့ လူတိုင်းအတွက် မ Hot ပါတဲ့။ Hot ချင်တဲ့ လူတွေ Hot ပါသည်... သို့သော် မ Hot ချင်တဲ့လူတွေ ကျတော့လည်း မဟော့ပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဈေးကွက် ၀င်နေအောင် ကြံစည်နေသင့်သည်။ လုပ်နေသင့်သည် ထင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေမှာ မှန်ကန်တဲ့ skill ရှိဖို့လိုသည်ထင်ပါသည်။ ဒီ ကောင်းနေတယ် ဆိုတဲ့ ဈေးကွက်က ဘယ်တော့ရပ်သွား မှာလဲ။ ရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါ။ ငါတို့တွေ ဘာဆက်ကြရမလဲ?.. ဘာလုပ်ရင် အသင့်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာလေးတွေ နဲနဲ တီးခေါက်ထားဖို့ကောင်းတယ် ထင်မိပါသည်။
ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ ခြင်းဟု ဟုမထင်မိပါ။ ဆွန်ဇူးက ဤသို့ မိန့်ဆို၏။ "စစ်မြေပြင်သို့ ဦးစွာရောက်နှင့်ပြီး ရန်သူကို စောင့်တိုက်ရသူသည် သက်တောင့်သက်သာ အားဖြည့်နားနေရ ၏။ စစ်မြေပြင်သို့ နောက်ကျရောက်လာပြီး ကတိုက်ကရိုက် စစ်ထိုးရသောသူကား မောပန်းနွမ်းနယ်မှု ဒဏ်ကို ခံရတတ်၏။"
"Who Move My Cheese?" စာအုပ် ထဲကလို နေ့စဉ် ရနေတဲ့ Cheese တွေ ကုန်သွားရင် လူကလေး လို ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး "ငါ့ဒိန်ခဲကို ဘယ်သူရွှေ့သွားလဲ လို့" ထိုင်စဉ်းစားမလား.. ကြွက်ကလေးလို နောက်ထပ် Cheese တွေရဖို့အတွက် ၀င်္ကဘာထဲကို စွန့်စားပြီး ပြန်ဝင်ပြီး.. ထပ်ရှာကြည့်ကြမှာလား။ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော်တို့ရော ဘယ်လိုဆက်လုပ် ကြမှာလဲ။
12 IT skills that employers can't say no to Job hunters with these IT skills are assured of employment, now and in the future.
Read detail: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9026623
Read detail: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9020942
တကယ်တော့ ကျွန်တော် အရင်က ColdFusion သမားပါ။ နောက်မှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် C# သမားဖြစ်သွားတာ။ ColdFusion နဲ့ ဒီဘ၀ကို စရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ColdFusion Lover ဆိုပါတော့။ ရေလို့ ကောင်းလို့ တချို့ code တွေဆိုအခုထိ မှတ်မိသေးတယ်။ အခုကွယ်ပျောက်လုဆဲ ဆိုတော့ စိတ်ထဲတောင် နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 5:40 PM 1 comment:
Labels: Ideas, Knowledges
Studies show that reading fromacomputer screen is about 30% slower than reading from paper (Nielsen, 1995, p. 154).
သုတေသနပြုချက်များအရ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် စာဖတ်ရခြင်းသည် စာရွက်ပေါ်မှဖတ်ရခြင်းထက် ၃၀% နှေးကွေး သည်။ (နယ်လဆင်, ၁၉၉၅, စာတမ်း-၁၅၄)
Posted by Philip Shield at 9:26 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 4:37 PM No comments:
ငယ်ငယ်တုံးက၊ ဆယ်တန်းပြီးတဲ့အခါ ကျောင်းတွေပိတ်လို့ အိမ်ပြန်တဲ့အခါတွေမှာ၊ အိမ်က ပွဲရုံအလုပ်တွေ ၀င်ဝင်လုပ်ပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း အရောင်းအ၀ယ် သဘောကို နဲနဲသိသိလာသည်။ လာဘ်နဲနဲ မြင်လာသည်။ တချို့ အရင်းမစိုက် လှေထိုးလိုက် အလုပ်လေးတွေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်လုပ် ကြည့်သည်။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခါတုံးက မိတ္ထီလာမှ ဦးလေးတစ်ဦး စက်ရုံမှ ပေပါခွံတွေ လိုသဖြင့် လိုက်ရှာခိုင်းသည်။ ကျွန်တော်ကလည်း မြို့ပေါ်က ရှိသမျှ အသိ ဆီစက်တွေ ဆီဆိုင်တွေ ကို အမြန် ဖုံးဆက်လိုက်သည်။ နဂိုတည်းက ဆီရောင်း၊ဆီဝယ် နေကြ၊ ယုံကြည်မှုလည်း ရှိပြီးသား ဆိုတော့ ပြောလို့ ဆိုလို့ကောင်းသည်။ ဖုံးဆက်လို့ မရတဲ့ နေရာတွေ ဂျောင်ဂျိုဂျောင်ကြားတွေပါ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် အမြန်သွားကြည့်သည်။ ပေပါခွံ တစ်လုံးရ တစ်လုံးဆွဲ သည်။ ဒီလိုနဲ့ အသကုန်ရှာပေးလိုက်ရာ နှစ်ရက်လောက်အတွင်း ပေပါခွံ (ဂ၁) လုံးလောက်ရသွားသည်။ တကယ်တမ်း အဲဒီအချိန်က လေးငါးဆယ်လုံးလောက်ပင် ရဖို့ ရှားပါးနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ Demand ကလည်းရှိ၊ ပထမဆုံးအခေါက်၊ ၀ယ်ဈေးနှင့်ရောင်းဈေးကလည်း နဲနဲဟတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတစ်ခေါက်က မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရလိုက်သည်။ မိတ်ဆွေတွေ၊ အဆက် အသွယ်တွေလည်း အများကြီး ထပ်ရလိုက်သည်။ အဲဒီ ဖောက်သည်တွေ (ဆီဆိုင်တွေ၊ ဆီစက်တွေ) က ကျွန်တော် ပေပါခွံပုံမှန် ၀ယ်မှန်းသိသွားတော့ နောက်ထပ် ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ပုံမှန်ပုံမှန် ပေပါခွံ များ လာပို့ကြသည်။ ဒါပေမယ့် နောက်အခေါက်တွေ က အရင်ခါလောက် သိပ်မမြတ်တော့ပါ။ ပုံမှန် ပွဲခ လောက်တော့ရသည်။ သူတို့ကလည်းယုံကြည်ကြပါသည်။ ပိုက်ဆံချက်ချင်းပေးဖို့မလို။ ဟိုဘက်ကရမှ သွားသွားပို့ပေးသည်။ ငွေ အရေးကြီးတဲ့လူတွေကို တော့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက နဲနဲစိုက်ရှင်းပေးထားရသည်။
ဦးလေးဆီမှာက ဆယ်ဘီးကားကြီးတွေ ရှိသည်။ တချို့ဆယ်ဘီးကားကြီးတွေက နယ်ကကုန်တွေသယ်သွားပြီး ရန်ကုန်ကအပြန်မှာ ခါလီပြန်သည်။ [ခါလီ=ဗလာ]။ အဲဒီကားတွေနဲ့ ကျွန်တော့် ဆီက ပေပါခွံတွေဝင်ဝင်သယ်သည်။ ပြီးလျှင် ကျွန်တော်က အလုပ်သမားတွေကို တင်ခချခ ရှင်းပေးသည်။ တခါတလေ သူတို့လာမသယ်နိုင်လျှင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ ပေပါခွံတွေ ပုံနေတတ်သည်။ ပေပါခွံ အလုံး နှစ်ရာကျော် သုံးရာလောက်ကြီး ပုံနေတတ်သည်။ အိမ်ရှေ့က၀င်းကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့်ပေပါခွပုံကြီးက တောင်ပုံကြီးလို ဖြစ်နေတတ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်တာက လက်သွက်ရသည်။ holiday မရှိ။ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို နေ့မီးညမီး အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ ကုန်ပစ္စည်း ဈေးကွက်တွေ၊ အတက်အကျတွေ မျက်ခြေမပြတ်အောင်၊ ဖုံးတွေ အသကုန်ဆက်ရသည်။ ညတွင်းချင်း ထပြေးပြီး ၀ယ်တန် ရောင်းတန် လုပ်ရသည်။ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ကတ္တားချိန်ရသည်။ ဆိုင်ကယ်မီး ကားမီးထိုးပြီး အားချင်း ၀ယ်ရတာတို့ ဘာတို့လည်းရှိတတ်သည်။
နောက် မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခေါက် က မိတ္ထီလာမှာ နေရင်း၊ ထီလာ ငရုတ်ဈေးကွက် ကို တဖြည်းဖြည်း လေ့လာသည်။ ကျွန်တော်က မိတ္ထီလာ ငရုတ်သမားတွေ၊ ပွဲရုံတွေ ဆီ အမြဲဝင်ထွက် သွားလာ ရင်း၊ အလုပ်အကိုင်ကြောင်း သတင်းတွေ ဖလှယ်ရင်း၊ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားကြသည်။မိတ္ထီလာက ငရုတ်ဈေးကွက်မှာ ကျွန်တော်တို့မြို့လောက် Heavy သမားတွေမရှိပါ။ ကိုယ်ပိုင် Brand ကောင်းကောင်း တွေကိုင်ပြီး Export ဈေးကွက်ကို ချုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် လုပ်တဲ့အဆင့်အထိတော့မရှိ။ အဲဒါကြောင့်လည်း တစ်ခါတလေ အလွန် ၀ယ်လို့ကောင်းသည်။ အများစုက ကုန်သည်လေးတွေချည်း ဆိုတော့ ရန်ကုန် မန္တလေးမှာ ဈေးလေးနဲနဲ လှုပ်တာနဲ့ ဗိုက်နာလာကြသည်။ ရောင်းဖို့ အတင်းလိုက်စပ်နေ တတ်ကြသည်။ ငရုတ်ဈေးကွက် ကလည်း တော်တော် အကဲပိုသည်။ အတက်အကျ အလွန်ဆတ်သည်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီတုံးက မန္တလေးမှာ ဈေးက ရုတ်တရက် ထိုးကျသွားသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ထင့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သတင်းတွေ၊ အချက်အလက်တွေ၊ ဖြစ်နိုင်ချေတွေ ကို အခြေခံပြီး "ဒီဈေးကျချိန်ကလေး ခဏလေး ပဲ" လို့ စိတ်ထဲက ထင်သည်။ မန္တလေးက ပွဲရုံကို ဆက်ပြီးတိုင်ပင်တော့လည်း သူကလည်း ခဏလို့ထင်သည်တဲ့။ ဒါနဲ့ မြို့ထဲ ငရုတ်သမားတွေဆီ ဆိုင်ကယ်နဲ့ တစ်ပါတ်ပါတ်တော့ သူတို့က ကျွန်တော့် အတင်းထိုးရောင်းနေကြသည်။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ တစ်ပြားမှ မရှိပါ။ နှစ်ပါတ်ဆိုင်း ၊ သုံးပါတ်ဆိုင်း ကြွေးရလျှင် ၀ယ်မည် ဟု လေသံပစ်ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့က ခု ၀ယ်မယ်ဆို ခု လာပို့မည်ဟုပြောသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကြွေးတွေနဲ့ တမြို့လုံးရှိ ငရုတ်သီးတွေ ၁ ရက်တည်းနှင့် ၀ယ်ထည့်ပစ်လိုက်သည်။ အိတ်ကြီး(ဂုန်နီ အိတ်ကြီး) သုံးရာလောက် ရှိမည်ထင်သည်။ ကျွန်တော့် ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေက မျက်လုံးပြူးနေသည်။ ကျွန်တော်က ၁၉ နှစ်လောက်ဆိုတော့ သူတို့က ကလေးဟုထင်ချင်ထင်မည်။ ငရုတ် ဂိုဒေါင်အလတ် တလုံးစာလောက် ကြွေးနဲ့ဝယ်ပစ်တာဆိုတော့ ပြူးမယ်ဆိုလည်းပြူးလောက်သည်။ ငွေက အဲဒီခောတ်က ငွေကြေးဖြင့် သိန်း ၃၀ ဘိုးလောက်ရှိမည်ထင်သည်။ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ပါ။ နောက်နှစ်ပါတ်လောက်နေတော့ ဈေးက သိပ်မထူးသေး။ ကျွန်တော် စိတ်ပူလာပြီ။ ကြွေးတွေက စတောင်းနေကြပြီ။ ကြွေးသမားတွေက ဖုံးတွေတဂွမ်ဂွမ် ဆက်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ကတိပေးထားရတော့ မျက်နှာ ပူလှပြီ။ ဒါနဲ့ လှည့်ပတ်ချေးရာ ဦးလေးတစ်ယောက်ဆီက အကူအညီရသည်။ ကြွေးသမားတွေကို လိုက်ဆပ်ရသည်။ အကုန်လုံးတော့ အကြေမဆပ်နိုင်သေး။ ကြွေးရှင်တွေ စိတ်ပြေအောင် နဲနဲစီ ပေးထားခဲ့ရသည်။ အဖေ့ကို အကူအညီတောင်းရသည်။ အဖေက သူလည်း ငွေကျပ်နေသည် ဟုပြောသည်။ မန္တလေးကို ရောင်းကြည့်ပါ့လားဟုအကြံပေးသည်။ ကြားထဲ ငွေလိုရင် ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေဆီက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်လှည့်ကြည့်ဟုပြောသည်။ အဲဒါနဲ့ မန္တလေးကို ဆက်ပြီး ဈေးစပ် ကြည့်သည်။ ဈေးညှိရင်းညှိရင်း တဲ့ သွားကြသည်။ ထင်သလောက်မမြတ် နဲနဲတော့ မြတ်သည်။ အားချင်းပဲ အလုပ်သမားတွေ အမြန်ငှား၊ ၀ယ်ထားတဲ့ ကုန်တွေ ညီအောင်ပြန်စပ်၊ ညတွင်းချင်း တင်ပစ်လိုက်သည်။ ငွေက ချက်ချင်းမရသေး စောင့်ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားတာပဲ ဖြစ်သည်။ ဒီလို ဟိုလျှောက်လုပ်ဒီလျှောက်လုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေလေးရှိတော့ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်နေတုံးကလည်း အိမ်က အထောက်အပံ့ သိပ်မလိုခဲ့ပါ။ ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် အစောပိုင်းလောက်ပဲ အိမ်က ယူရသည်။ နောက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဆင်ပြေသွားသည်။
နောက် မိတ္ထီလာမှာ ဂျပန်စာ သွာတက်တုံးကလည်း အိမ်က စရိတ်ဆိုပြီး ငွေတစ်သိန်းလောက် ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတိုင်းသုံးပစ်ရင် ကုန်သွားမည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ရမည် ဟုစဉ်းစားကာ သုံးလုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ကိုင်လိုက်သည်။ အမ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက်က သုံးလုံးရောင်းနေတာ့ သူလည်း ကော်မရှင်ရ ကျွန်တော်လည်း အမြတ်ရ ဆိုပြီး ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။ အဲဒီ ငွေတစ်သိန်းက အမကို Deposit ပေးထားရသည်။ သုံးလလောက် အရဲစွန့်ပြီး ကိုင်လိုက်သည်။ အမ၀မ်းကွဲ တို့လင်မယား က အပါတ်တိုင်း စာရင်း နှင့် ရောင်းရငွေ လာပို့ကြသည်။ ကျွန်တော်က စာရင်းတွေ စစ်ရသည်။ ဘယ် ဂဏန်း ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရသလဲ တွက်ရသည်။ လတိုင်း မြတ်ပါသည်။ အဲဒီ မြတ်တဲ့ ပိုက်ဆံဖြင့် ဂျပန်စာ တက်ခဲ့ပါသည်၊ စားရိတ်ရခဲ့ပါသည်။ ဒါတင် မကသေး၊ ရန်ကုန်မှာ နေတော့ ဘောလုံး ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပေးရဖူးသည်။ ကျွန်တော်က အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော်ဆီက ထိုးကြသည်။ အစက အပျော်လုပ်ပေးရင်း နောက်ကျတော့ လူများများလာ သည်၊ ငွေပမာဏတွေလည်း များများလာကြသည်။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင် ဒါနဲ့ ဘ၀ပျက် သူတွေလဲတွေ့တွေ့နေရသည်။ ငွေအရ ကောင်းသော်လည်း၊ အကြောင်းကြောင်းတွေ ကလည်းရှိ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း မဟုတ်တာနဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုံးဝ ရပ်ပစ်လိုက်သည်။
တစ်ခါတလေ မိမိဘာသာ စဉ်းစားမိသည်။ ဒီလို စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး၊ အဲဒီထဲမှာလည်း ကျင်လည်လာခဲ့ပြီးနောက်မှ၊ ကျွန်တော် အိုင်တီနယ်ပယ်ထဲ မှာ web-based application တွေကို ဇောက်ချလုပ်နေတဲ့ professional လုပ်နေသူတစ်ဦး ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိတော့ပါ။
Posted by Philip Shield at 10:02 PM3comments:
Posted by Philip Shield at 9:57 AM No comments:
နွေဦးနံနက်ခင်းရဲ့ နွေးထွေးတဲ့နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအိပ်မောကျနေတဲ့ ပင်လယ်ဖျံလေးများ။ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်း မှာ December က နွေရာသီ။ Sydney တို့ မဲလဘုန်းတို့မှာလည်း အတူတူပဲ။
တောင်တွေအားလုံးက သက်ရင့်ကျောက်တွေ၊ အာရှမှာ ဒီလိုကျောက်သားမျိုး သိပ်မရှိဘူး။ ဒီလို သက်ရင့်ကျောက်တွေရှိလို့လဲ ဒီမြေက စိန်တွေထွက်တာ။
နာမည်ကျော် ဂွတ်ဟုပ်အငူ (Cape of Good Hope) (တရံရော အခါက ကိုလံဘတ် တို့သည် အာရှတိုက်ကို ရှာဖွေရန် ပေါ်တူကီမှ ရွက်လွှင့်လာရာ မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံး၍ လက်လျှော့လုနီးနီး ဤနေရာအရောက်တွင် လေကြောင်းမှာ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသဖြင့် မျော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်များ ရရှိလာပြီး ဆက်လက်ရွက်လွှင့်ခဲ့ရာ အာရှတိုက်ကြီးကို ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဥရောပ-အာရှ ရေကြောင်း လမ်းပေါက်သွားခဲ့သည်။ ဤနေရာကိုလည်း Good Hope အငူဟု အမည်သညာ တွင်စေ ခဲ့လေသည်။)
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာနှင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ ဆုံချက် (သို့) ကိပ်ပွိုင့်(Cape Point)။ သမုဒ္ဒရာ နှစ်ခုက ရေနှစ်မျိုး ကတကယ် ကွာပါတယ်၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကရေက နဲနဲ နောက်ကျုကျု နဲ့ နွေးထွေးတယ်၊ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကရေက စိမ်းပြာညို့ပြီး ကြည်လင်တယ်၊ ရေခဲတမျှ အေးစက်တယ်၊ လက်ထည့်ကြည့်ရင် ကျင်စက်နဲ့တို့သလိုခံစားရတယ်၊ အေးလွန်းလို့။
အဲဒီနေရာကနေဆို တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကို သိပ်မဝေးတော့ဘူး။ 6248 km လောက် ပဲလိုတော့တယ်။
Posted by Philip Shield at 4:40 PM No comments:
It's much more than justaphone! Check out some of its additional functions. (iPhone ကြော်ညာလေးတစ်ခုပါ။ ကြည့်ပြီးရင် ပြုံးရပါမယ်။)
Posted by Philip Shield at 10:29 AM No comments: